ठमेलमा एटिएम सेवा ठप्प, स्वदेशी–विदेशी ग्राहक समस्यामा,किन बन्द छन् ठमेलका सबै एटिएम? – " कञ्चनजंगा News "
ठमेलमा एटिएम सेवा ठप्प, स्वदेशी–विदेशी ग्राहक समस्यामा,किन बन्द छन् ठमेलका सबै एटिएम?
No Comments on ठमेलमा एटिएम सेवा ठप्प, स्वदेशी–विदेशी ग्राहक समस्यामा,किन बन्द छन् ठमेलका सबै एटिएम?
प्राय जसो भिड रहने ठमेल बजार शनीबार भने झनै अस्तव्यस्त रहने गरेको छ ।शनिबार विद्यालय, कलेज, अफिस विदा हुने भएकाले ठमेलमा उपत्यका वासीको बढी आवतजावत हुने गरेको हो ।
सधाझैँ हिजो शनिबार विदाको समय पारेर किनमेलका लागी ठमेल आएका मानिसहरु एउटै कुराले रुष्ट देखिए । भक्तपुर घर भई शनिबार किनमेलका लागी ठमेल आएका दिनेश बस्नेत त्यहाँ रहेको विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एटिएम नचल्दा निराश देखिन्छन् ।
एनआइसी एशिया बैंकका ग्राहक उनी ठमेलमा रहेका सबैजसो वित्तय संस्थाको एटीएम पुगेर फर्किएका रहेछन् । आज विदाको दिन केही किनमेल गरौँ भनेर ठमेल आएको एटिएम नचलेर अब रित्तै घर फर्किनु पर्ने भयो, उनले भने अब पैसाँ निकाल्न कि त सुनधारा पुग्नुपर्छ कि त सोह्रखुट्टै बोरु घरै जान्छु ।
बस्नेत त एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन केहि दिन अघिबाट किनमेलका लागी ठमेल आउने सबै मानिसको यही गुनासो छ ।
आज भोली बैंकमा खाता नहुने मानिस भेटिन त गाह्रै छ । अनी अधिकांश बैंक खातावालाको साथमा एटीएम हुन्छै हुन्छ । त्यसैले हातमा खर्च बोकेर हिड्ने मानिस कमै भेटिन्छन् । उता विभिन्न बैंक तथा वित्तय संस्थाले ठाँउ–ठाँउमा एटीएम सेवा विस्तार गरेको हुदाँ किनमेल गर्न बजार जाने ग्राहकलाई झनै सहज भएको छ । तर ठमेल पर्यटन विकास परिषद्ले भिजिट नेपाल २०२० को तयारी भन्दै ठमेल क्षेत्रको इन्टरनेट तथा टेलिफोन तार काटिदिएपछि त्यहाँ रहेको सबै जसो बैंक तथा वित्तय संस्थाका एटिएम ठप्प रहेका छन् ।
ठमेलबजारलाई स्वदेशी मात्र होइन विदेशी ग्राहकको पनि पकड क्षेत्रको रुपमा लिइन्छ । विभिन्न देशबाट नेपाल घुम्न आएका विदेशी पर्यटकहरु ठमेल बजारमा छ्याप्छ्यप्ती देखिन्छन । एटिएम नचल्दा नेपाली ग्राहक झै विदशी ग्राहकको अवस्था पनि उस्तै देखिन्थ्यो ।
किन बन्द छन् ठमेलका सबै एटिएम
भिजिट नेपाल २०२० को तयारी भन्दै ठमेल पर्यटन विकास परिषद्ले पुस ३ गतेबाट लापरवाहीपूर्ण तरिकाले इन्टरनेट तथा टेलिफोन तार काटिदिएपछि ठमेलमा रहेका सबैजसो एटएिम बन्द भएका हुन ।
विशेषगरी उक्त क्षेत्रमा विद्युत्का पोलबाट लगिएका वल्र्डलिंक, भायोनेट, सुविसु, टेलिकम लगायत सेवाप्रदायकका इन्टरनेटको तार काटिए तथा सगै टेलिफोत तार ४ काटिएसगैँ बैंकहरुको सम्बधित शाखाबाट एटिएमसगँको कनेक्सनमा समस्या आएको हो ।
बैंकका अनुसार ठमेलमा रहेको सम्बन्धित शाखाको मात्र एटिएम चलीरहेको र काटिएका इन्टरनेट र टेलीफोनको तार पुन जडान नभएसम्म यो समस्या रहिरहने छ ।
ठमेलमा रहेको एनआईसी एसिया, प्रभु, ग्लोेबल आईएमइ नबिल लगायतका अन्य बैंक तथा वित्तय संस्थाको एटीएम यसै कारण ठप्प छन् ।
उता ठमेल पर्यटन विकास परिषद्ले ऐन विपरित इन्टरनेट तथा टेलिफोनको तार काटेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आपत्ती जनाएको छ ।
केही दिन अघि प्राधिकरणले एक सूचना प्रकाशित गर्दै उक्त कार्य दुरसञ्चार ऐन, २०५३ विपरीत तथा दण्डनीय रहेको बताएको छ ।
नेपाल दुर सञ्चार प्राधिरकण र सरोकारवाला सेवा प्रदायक संस्थाहरुसँग समन्वयन नगरि इन्टरनेट तारहरु काट्दा सेवाग्राही तथा आम नागरिकहरु दुरुसञ्चार सेवाबाट बञ्चित हुने तथा यसमा प्रयोग हुने तार र यन्त्र उपकरण नेपाल भित्र निर्माण नहुने हुँदा सेवा सुचारु गर्दा ठुलो मात्रामा थप आर्थिक व्यवभार समेत पर्ने भएकाले यस्तो कार्य कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उचित नभएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
ईन्टरनेट, टेलिफोन लगायतका सुविधा पाउनु सबै मानिसको अधिकारको विषय हो, लामो समय सम्म स्थानीय जनता दुरुसञ्चार सेवाबाट बञ्चित भइरहदाँँ सरकारवाला निकायले यस विषयमा ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ ।
← शक्तिशाली पासपोर्टको १०१औँ स्थानमा नेपाल, अमेरिका र बेलायत पनि खस्किए → २० देखि ४० वर्षको उमेरमा नगर्नुहोस् यी आठ काम, जीवनभर दुर्भाग्यबाट छुटकारा पाइँदैन